Lubuntu 16.04 LTS inotakurirwa Raspberry Pi | Linux Vakapindwa muropa
Izvi ndizvo zvinoita alpha vhezheni yeLubuntu 16.04 LTS inoita kunge iri Raspberry Pi, ine LXQt desktop.
Iyo yakajeka vhezheni yeUbuntu inoshanda sisitimu, kureva Lubuntu, yatumirwa kune kadiki Raspberry Pi komputa, uchishandisa diki LXQt desktop kuti iite ishande.
Nzira yekuzviita ndeye Ubuntu Pi Flavour Muiti, chipi Takambotaura kare pane ino peji, iyo inobvumidza iwe kuti uise akasiyana mavhezheni eUbuntu pane diki Raspberry Pi uye iite iyo 100% ienderane neayo maficha.
Kuyedza kuri pachena kuti kwakaitwa neyekutanga vhezheni yeLubuntu 16.04, sezvo vhezheni yekupedzisira isati yabuda. Kuedza yakaitwa nechikwata cheLubuntu QA, iyo yandaida kuyedza kuti ndione kana iyi sisitimu yekushandisa yaikwanisa kumhanya zvakatsetseka pakombuta diki.
Mhedzisiro yacho yave inogutsa, zvisinei, ivo vataura kuti sezvo ichingoedza chete inogona kunge isina kugadzikana, chimwe chinhu chinonzwisisika, sezvo ivo vari kurodha zvakare isina kugadzikana yekutanga yekutanga system yekushandisa uye iyo ichine mwedzi yakareba yekusimudzira.
Ichokwadi chiedzo chinonakidza kubvira nekuda kwekudhura kwayo uye diki saizi, vanhu vazhinji vari kusarudza kushandisa simba reRaspberry Pi, iro rine zvine hunyanzvi hwekushandisa pamari shoma yainotora.
Isu tinokuyeuchidza iwe kuti yekupedzisira vhezheni yeLubuntu 16.04 LTS uye ese eUbuntu flavour akagadzirira kuburitswa kutenderera Kubvumbi 21 chegore irori, vhezheni iyo pasina mubvunzo ichaunza yakawanda nhau nekuda kwayo refu LTS tsigiro.
Kana iwe uchida kuzviedza, unogona kuenda kune webhusaiti ye Ubuntu Pi Flavour Muiti, umo zvese zviri zviviri Lubuntu uye zvese zvinwiwa zveUbuntu zviripo iyo panguva ino yakwanisa kutakura kuRaspberry Pi. Pano pane zvakare dzidziso diki kurodha iyo LXQT desktop nharaunda, inova desktop yakashandiswa kuyedza iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Lubuntu 16.04 LTS inotakurirwa Raspberry Pi
Mahofisi akanakisa emahofisi e2016 eLinux